विराटनगरको साख जोगाउने छु : महानगरपालिका प्रमुख कोइराला – Sulsule
सुलसुले २०७९ जेठ २४ गते १३:१९ मा प्रकाशित
विराटनगर । मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुन् । सादा जीवन, उच्च विचार, शालिन एवं भद्र स्वभावका धनी उनको यही व्यक्तित्वले यस पटकको निर्वाचनमा भारी मतले विजयी भए । नगरप्रमुख कोइरालासँग रासस प्रदेश नं १ कार्यालय राससकर्मी मोहम्मद सदरुल र मनोज दाहालले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले फोहर व्यवस्थापन, धरान उममहानगरपालिकाका प्रमुखले पानीको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे जस्तै विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले तपाईंले के कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
यो मानवको आवश्यकताको कुरा हो, तपाईं एउटा पसलमा जानुहुन्छ, एक गिलास पानी माग्नुहुन्छ तर पसलले मिनरल वाटर किन्न भन्छ, त्यसपछि तपाई शौचालय जानु हुन्छ तपाईलाई शौचालय चाहिन्छ । अब तपाईं खाना खानुहुन्छ वा विभिन्न वस्तु उपभोग गर्नुहुन्छ र त्यसबाट फोहर हुन्छ, फोहरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खाना खाएर पेट भरेपछि तपाईंलाई एकछिन हरियाली चाहिन्छ, त्यसको लागि पार्क चाहिन्छ । एकछिन आराम गरेपछि सडकमा हिँड्नुहुन्छ, सडक अस्तव्यवस्त भेट्नुहुन्छ, सिटी सफारी पनि त्यही, गाडी पनि त्यहीँ छ, रिक्सा, ट्रक, साइकल पनि त्यहीँ छ, तपाईं सडकमा सुरक्षित महसुस गर्नु हन्न, हिँड्न सक्नुहन्न । त्यसैले सडक सुरक्षित हुनुपर्‍यो, सडकपेटीमा सुरक्षा हुनुपर्‍यो । सँगसँगै गाडीमा हिँड्नेलाई दुर्घटना हुँदैन भन्ने महसुस हुनुपर्‍यो । त्यसलै विराटनगरमा तीन वटा मात्र रुट छ । ७०० किलोमिटर नेटवर्क सडकमध्ये २५० देखि ३०० मात्र कालोपत्र भएको देखिन्छ । अरु बाँकी सबै लथालिङ्ग छ । एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रम पनि सीमित ठाउँमा मात्र लागू भएको देखिन्छ । विराटनगरमा अझै सडकको समस्या सँगै ढल वा नालीको पनि समस्या रहेको छ । अब हामीले ४५० किलोमिटर बाटो बनाउँदा अगाडि भएको २५० देखि ३०० किलोमिटर कालोपत्र सडक भत्किने अवस्थामा पुगिसक्ने हुँदा जम्मा ७०० किलोमिटर बनाउनुपर्छ । त्यसको सञ्जाल बनाउन पर्‍यो । त्यसमा पहिले डुबानको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो, नभए सडक भत्किने हुन्छ । जबसम्म सडकमा पानी जम्न छोड्दैन तबसम्म हाम्रो प्रयास निरर्थक हुन्छ । त्यसैले यस कुरामा हामी गम्भीर छौँ ।
विराटनगर सहरलाई सफा, हरियाली एवं सुन्दर बनाउन तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन एवं हेर्न लायकको ठाउँ बनाउन धेरै महत्वकाँक्षी योजना बनाइएको छ । विराटनगरलाई साँच्चीकै महानगर बनाउन नयाँ सिराबाट काम शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । शुरुमै दातृ निकायले सहयोग पर्खेर काम हुन सक्दैन । महानगरपालिकाका पहिले आफूमा सक्षम हुनुपर्‍यो, अनि दातृ निकायले पत्याउँछ । त्यो पत्याउने परिस्थिति निर्माण गर्ने कार्य हाम्रो हो, त्यसका लागि हामी समपूणर् टोली लागिरहेका छौँ । हामी आत्मनिर्भर भएपछि कोकोसँग कुरा गर्ने, कुन परियोजनालाई आगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ । प्राचीन विराटनगरलाई संरक्षण गर्ने र आधुनिक विराटनगर बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ ।
निर्वाचनको क्रममा मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा र अहिले विजयी भएपछि अधिकांश मतदाताको मूल चाहना भनेको कर घटाउनु रहेको छ । जस्तो कि पैतृक सम्पत्तिबाट बनाएको घरको कर रु. ५० कर एक्कासी वृद्धि गरेर रु. पाँच हजार बनाइएको छ । त्यो फरकले गर्दा कतिपयले घरको कर नतिरेको देखिन्छ, कर घटाएर नगरवासीलाई अब कर तिर्न प्रेरित गराउनु पर्ने भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन भए विराटनगरवासीले खोजेको सम्पूर्ण कार्य गर्न सम्भव छ । पहिले महानगरपालिका सक्षम हुनुपर्‍यो । वर्षायाममा नगरका कतिपय स्थानमा डुबानको समस्या छ । व्यवस्थित ढल, नालीको व्यवस्था गरेर डुबानको समस्याबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्चस्तरको अस्पतालको आवश्यकता छ, बीमा र सुकुम्वासीको समस्याको समाधान खोज्नु छ । उनीहरुलाई एकीकृत बस्तीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय विपन्न जनता अहिलेको कर तिर्न असमर्थ रहेकाले करको दर घटाउने र करको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयस्तरको जस्तै स्तरीय पठनपाठनको सुनिश्चित गरी प्रत्येक वडामा त्यस्तो विद्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि पनि महानगरपालिकाका गरिबका छोराछोरी जसले आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षा अथवा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयमा आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गरिनेछ । अस्पतालको रुपमा १९ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी भए पनि त्यो राम्ररी सञ्चालन भएको देखिंदैन । यसरी छरिएर राख्नुभन्दा एकीकृत महानगरपालिका एउटा गुणस्तरीय अस्पताल स्थापना गरी निजी अस्पताल बराबरको सेवा सहुलित दरमा विराटनगरवासीलाई उपलब्ध गराउन सकियोस् । खानेपानीको योजनामा नगरवासीलाई मिनरल वाटर सरहको पानी धाराबाट उपलब्ध गराउनेतर्फ मेरो प्रयास रहनेछ ।
केही वर्षअघिसम्म विराटनगर देशकै दोस्रो मुख्य शहरको रुपमा परिचित थियो, राजनीतिक परिवर्तनपछि विराटनगरबाट पाँचजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आएर नेपालको छैठौँ सहरको रुपमा पुग्नुमा सङ्घीय सरकारले नजर यहाँ नपर्नु नै मुख्य हो । विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएका व्यक्तित्वले देश बनाउन लाग्नुभयो । आफैँ जन्मेको हुर्केको ठाउँलाई बनाउनुभन्दा देशभरिको विकासमा केन्द्रित भएकाले यस्तो भएको हो । सङ्घीय सरकारको मात्र मुख नताकी महानगरपालिका आफैँंले पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन प्रयास गर्नुपर्छ । अब हामी रु. एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले लागि परेका छौँ । विराटनगर सफल र सक्षम बनाउन लागिरहेको छौँ । विराटनगरको साख बचाउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेका छौँ, यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नगरवासीको साथ र सहयोगको पनि उत्तिकै जरुरत पर्दछ ।